ALAOTRA MANGORO : “Korontanin’ny Talem-paritry ny Tanora ireo mpitia volley-ball”
“Vokatry ny fandraisana andraikitra mihoatra ny fefy sy ny tsy fahaizana mampihatra ny fahalalana ananana dia misavoritaka ny taranja volley-ball aty aminay amin’izao fotoana izao”, hoy Ra-Est, mpitarika ity taranja ity hatramin’izay, tao Andreba Gara. 27 juin 2017
Ny Talem-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena aoAlaotra Mangoro no voalazan’izy ireo fa rangory fototry ny afo mahatonga izany.Voalazan’ity mpitarika ity hatrany fa hidiran’ity Talem-paritra ity hatramin’ny raharahan-tokatranon’ny klioba ary mitady handidy manapaka mihitsy izy amin’izany.
“Efa tena nidirany mihitsy aza ka izao lasa misavoritaka izao”, hoy ity mpitarika klioba sady mpanao gazety ara-panatanjahantena ity. “Milaza ho mahay loatra ny lehilahy satria efa nianatra tany ivelany toy ny hoe tany Etazonia sy tany Senegaly, hany ka tsy mahafantatra fa ilaina ny mampihatra ny fianarana amin’izay toerana hipetrahana saingy tokony hifanaraka amin’izay toerana iainana no hampiharana izany” hoy ihany Ra-Est.
Nomarihiny manokana fa ny Andreba Gara no hany tarika manana ny lazany sy mbola mitsangana amin’izao fotoana izao ho an’ity taranja volley-ball ity aty Alaotra Mangoro ary nisolo tena hatrany ny faritra teo amin’ny sehatra nasionaly saingy tsy fantatra izay ho aviny noho izao fandaraisana fepetra tsy ara-drariny nataon’ny Talem-paritry ny Tanora sy fanatanjahantena izao.